Chii chinonzi CES kana Kuchengetedzwa Kwemagetsi Commerce? | ECommerce nhau
Iyo CES (Yakachengeteka Magetsi Commerce) sisitimu inowedzera yekuita iyo inosanganisira kuchengetedza makadhi kuitira kuti kana kutenga kuitwe online, a rakasiyana password mukutenga pamhepo. Iyo sisitimu inozounza kuvimba kwakanyanya pakati pevashandisi kana vatengi pavanogadzira kutenga kwavo muchitoro kana bhizinesi repamhepo.
ICES kana Secure Electronic Commerce system inova nzira ine hunyanzvi hwekudzivirira kubiridzira, kubiridzira kubhadharisa nekadhi rechikwereti pasina kuvapo chaiko kwekadhi kana muchiitiko chekuba kana kuba kwechikwereti kana kiredhiti kadhi. Ndokunge, kuti iwe ugone kubhadhara zvaunotenga zvakachengeteka mune chero mashandiro anoitwa kuburikidza neInternet. Iko kunofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti iyi ndiyo imwe nzira yekuwedzera iyo inosanganisira kuchengetedza makadhi kuitira kuti kana kutenga kuchiitwa online, yega password inokumbirwa yekutenga pamhepo.
Ndichiri kune rimwe divi, iyo CES inogona kutaridzwa sechishandiso chekudzivirira mamiriro asingadiwe nevashandisi veiyi kirasi yemasevhisi. Zvakare nemusiyano mudiki zvine chekuita nemamwe mamodheru ane zvakafanana maitiro, uye mune ino kesi, CES kana Yakachengeteka Magetsi Commerce inofanirwa kugadziriswa kubva kumagetsi kubhengi kubhangi rako. Neichi chikonzero, mitsara yekuchengetedza Izvo zvinosimbiswa zvakare nekuitwa kwesisitimu ino.
1 Nongedzo yekuitangisa
2 Nzira yekukumbira kuzivikanwa kwako pachako?
3 Zvakanakira kushandisa iyi chengetedzo system
4 Zvinangwa mukuitwa kwayo
5 Matipi Ekutengesa Kwakachengeteka
6 Iine kubatana kwakachengeteka
7 Dzivisa kushandiswa kwekubiridzira
Kana iwe uchida kunakidzwa neaya matanho ekuchengetedza, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekutora mamwe akareruka nhungamiro dzekuita. Kufanana neaya atiri kuzokupa kubva zvino zvichienda uye izvo zvinoda kuti iwe uzviite zvine mutsindo kubva zvino zvichienda mberi.
Pakutanga, iri mubvunzo wekusarudza nzira yekubhadhara nechikwereti kana kiredhiti kadhi iyo inonongedzwa kune iyo yakachengeteka peji kuburikidza neanonzi data encryption. Kubva kwavachakubvunza zvinotevera:
Uye pakupedzisira, inoenderana 3-manhamba chengetedzo kodhi inoonekwa kumashure kwekadhi.
Vachave vanokwana kukwana kuitira kuti iwe ugone kubhadharira izvo zvigadzirwa zvakatengwa uine yakazara vimbiso yekuti hapana chichaitika kwauri mune yega yega mashandiro aunoita neiyi nzira yepasirese yekubhadhara.
Nhanho inotevera mune ino isiri yakanyanyisa kuomesa maitiro inosanganisira kuisa iyo data. Kune izvo zvausina sarudzo kunze kwekupa kiyi yakavanzika ine kodhi yenhamba uye iyo inogona kuwanikwa kuburikidza neimwe yeanotevera nzira dzakajairika. Ichave iyo nguva iyo yako kiredhiti institution inokutumira iwe kune yako nhare, neSMS, iyo nhamba yenhamba iyo iwe yaunofanirwa kuisa.
Paunenge uri kune rimwe divi, usakanganwa kuti bhangi rako richange rakakupa kare kadhi rekubatanidza nenzira yauchazokwanisa kuzivisa zvisina tsananguro kodhi yekuverengera yaunofanira kuisa. Ichave iyo chaiyo nguva iyo iwe yaunofanirwa kuisa kadhi rako rePIN, inova kiyi iwe yaunoshandisa kumaATM kutora mari.
Nzira yekukumbira kuzivikanwa kwako pachako?﻿
Mune imwe tsinga, isu tinofanirwa kuyeuka panguva ino kuti kana iwe uri kutenga uye usina iyo CES, iyo system kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsvaga , bata bhangi rako uye ukumbire yako CES. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ruzhinji rwemasangano emari anopa sevhisi kune vatengi vavo, mune imwe fomati kana imwe.
Kubva uko vatengi kana vashandisi vanogona kukumbira CIP kubva zvino zvichienda mberi. Kana chii chakafanana, iyo Yega Kuzivikanwa Kodhi. Nokusingaperi, iko kusimbiswa ndiyo PIN yekadhi iyo inoshandiswa mumaATMs pamwe neNIF inoenderana. Paunenge uri kune rimwe divi, iwe unogona zvakare kukumbira CIP yekuwedzera chengetedzo, kuburikidza newebsite webhangi chero nguva.
Zvakanakira kushandisa iyi chengetedzo system
Kune rimwe divi, iyo CES, sezvatichadaidza kuti password / PIN / siginecha inodiwa kuti ubhadhare mumabhizimusi emagetsi anoshandisa iyi system yekuchengetedza, saka hazvingakwanise kuita chero rudzi rwekushanda pasina bhangi rako kana bhokisi ndapa iyo CES. Izvi zvinodaro nekuti isu tinoshanda pamwe nesisitimu iyo inoreva kuchengetedzeka kukuru uye kukumbira iyi CES Code kune yakachengeteka zvemagetsi commerce inovimbisa mutengi 100% anti-kubiridzira chengetedzo.
Iyo ndiyo sisitimu iyo iwe yaunogona kushandisa kudzivirira kubiridzira kushandiswa kwechikwereti kana madhibhiti makadhi kutenga muchitoro kana online online commerce. Izvo zvakakosha kuti ugadzire iko kuvhiya nekuti unenge wakadzikama kana uchinge ubhadhara invoice yeaya maficha. Pamusoro pemamwe akajairwa kana echinyakare masisitimu awakashandisa kusvika ino chaiyo nguva.
Zvinangwa mukuitwa kwayo
Muzviitiko zvese, iwe unofanirwa kurangarira kubva ikozvino zvichienda mberi izvo kuvimbisa yakachengeteka zvemagetsi commerce system inokurudzira wako anogona mutengi kutenga. E-commerce inokura miniti neminiti. Kana iwe uine online chitoro, zvakakosha kuti upe garandi kana akateedzana matanho ekuchengetedza kune vashandisi vako, kunyanya kana iri nguva yekutanga ivo kugadzirira kutenga muCommerce yako.
Zvakare nenyaya yekuti iyi yekuchengetedza modhi mukutenga kwakaitwa muzvitoro kana muzvitoro zvinokupa iwe nekuona kuchengetedzeka kwekutengeserana kune vese mutengesi nemutengi. Hazvishamisi kuti inoratidzwa nenyaya yekuti kana mutengi apinda kadhi rake rechikwereti, bhangi rinomutumira kodhi iyi kutsigira kuzivikanwa kwake. Nenzira iyi, garandi yekuchengetedza mbiri inogadzirwa, sezvo semutengesi iwe uchave nechokwadi chekuti ndiye mushandisi chaiye anotenga, nenzira imwecheteyo mutengi haatambure njodzi yekuba chitupa.
Matipi Ekutengesa Kwakachengeteka
Tatarisana nekushanda muchitoro chepamhepo kana kutengeserana, chimwe chezvinangwa zvekutanga zve chero mushandisi kana mutengi kuchengetedza zviito zvavo pane zvimwe zvakateedzana zvekufunga kwehunyanzvi. Hazvishamise kuti rudzi urwu rwebhizimusi runowanzoita zviitiko zvisingadiwe zvinotyora mashandiro kubva ikozvino.
Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei nhevedzano yekuchengetedza inofanira kutorwa iyo isu ticha tsanangura muchidimbu pazasi. Saka kuti kubva panguva iyoyo iwe ugone kuziva zvaunofanirwa kuita mune yega yega mamiriro ezvinhu atinozotsanangura.
Tsvaga peji rewebhu rechitoro cheadhijitari icho chiri pamusoro pezvose zvakachengeteka kuti utenge zvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu zvacho. Mupfungwa iyi, zvakanaka kushandisa madomeni ayo anopa kuchengetedzeka rinova iro vimbiso chaiyo yekuti mashandiro edu achave akachengeteka kubva zvino zvichienda mberi.
Iine kubatana kwakachengeteka
Ndichiri kune rimwe divi, hapana mubvunzo kuti isu tinofanirwa kushanda nemichina yezvigadzirwa zvinotipa chengetedzo mumafambiro atichaita kubva zvino zvichienda mberi. Ehezve, mune ino pfungwa, hapazove nesarudzo kunze kwekudzivirira netiweki dzemabhawa, nzvimbo dzekutenga kana zvitoro zvepanyama, zvinova izvo zvinopa kusachengeteka kukuru murudzi urwu rwekufamba. Nekudaro, chinhu chinopa zano zvakanyanya iko kushandisa kweyekushandisa michina iyo isingakupe chero kusahadzika maererano nekuchengetedza kwavo. Pakupera kwezuva, iwe unodzivirira iko kweapo nekutyisidzira uko kunogona kukanganisa yako wega kana yemhuri mari sezvo iri imwe yezvinangwa zvako zvakakosha parizvino.
Zviito zvako zvichave zvine chinangwa chekumisikidza aya mashandiro nezvose zvinogoneka zvivimbiso. Kunze kwechimiro chemutsara webhizinesi ravo kana hunhu hwemakambani edigital aya. Unogona kunge usiri kuzviziva izvozvi, asi matekinoroji matsva anogona kunge ari vako vanobatsirana pakutengesa zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu zvine chengetedzo izere.
Dzivisa kushandiswa kwekubiridzira
Imwe yezvinangwa zvako zvepedyo ndeyekuti haugone kuve nerudzi rwezvinetso nekubhadhara zvaunotenga pamhepo. Iwe unogona kuzadzikisa izvi nekupinza akateedzana matipi isu atichazotsanangudza pazasi uye ayo akabatanidzwa muCES:
Ive nekuchengetera kumatunhu asingakupe yakaderera kuchengetedzwa mukuita.
Chengeta zvese zvako zvetekinoroji zvakagadziridzwa zvizere kuitira kuti varege kuve vanobatwa nezviito zvevamwe mapato.
Shingairira zvine chekuita nekutyora kunogona kuitika kwevamwe matanho akachengetedzwa. Nekuti ivo vanodawo kunyatso tarisisa kubva kumativi ese ekuona.
Uye pakupedzisira, zvidzivirire kubva kumarudzi ese emavhairasi emakomputa anogona kuzvisimbisa mumidziyo yemakomputa. Nechivimbiso chechokwadi pane chokwadi chekuti mashandiro edu achave akachengeteka kubva zvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Chii chinonzi CES kana Kuchengetedzwa Kwemagetsi Commerce?